Umculi kamaskandi nengcwenga ye-albhamu | News24
Umculi kamaskandi nengcwenga ye-albhamu
PHOTO: supplied UJabulani ‘Ntombi-Emnyama” Nzuza
UNESIFISO sokuthi angabi nedumela eNingizimu Afrika yonkani kodwa lapho eqhamuka khona engaziwa umculi kaMaskandi osanda kukhipha i-albhamu yakhe entsha.
UJabulani ‘Ntombi-Emnyama” Nzuza (39) wase Sweetwaters ukhiphe i-albhamu yakhe yesine ethi Imali yegazi.
Le-albhamu inezingoma ezingu-13 kanti kuzo kukhona azikhonze kakhulu ezithi Imali yegazi kanye nethi Awuhlale phansi. Ekhuluma ne-Maritzburg Echo ngale-albhamu uNzuza uthe isihloko sayo sikhuza abantu abaphilisa imindeni yabo ngemali yegazi.
“Emini uthola ukuthi umuntu ushayela amatekisi kodwa ebusuku uyinkabi ubulala abantu. Uthola ukuthi umkakhe nezingane bakhuluphele kodwa yena uzacile ngoba udliwa umsebenzi wakhe lo wokubulala abantu. Ngikhuza abafwethu ukuthi bayeke ukuhamba lendlela yobumnyama.”
Lomculi ongene endimeni yezomculo ngo 1992 ecula isicathamiya uthe kumphatha kabi ukuthi waziwa kuphela ezindaweni ezikude kodwa ekhaya akaziwa.
“Kuba buhlungu kimina uma ngaziwa koGoli, Eastern Cape kanye nakwezinye izindawo kodwa ekhaya la ngikhuliswe khona futhi ngaqala khona umculo wami ngingaziwa. Njengamanje ngizama ukuthi ngale-albhamu ngikhangise ngomculo wami lapha eMgungundlovu.”
UNzuza uthe ngonyaka ka 1995 wathatha isinqumo sokuziphumela yedwa acule umasikandi ngoba wayenothando lomculo wesintu.
“Bengibukela kakhulu kubantu abafana noMfaz’Omnyama noBhekumuzi Luthuli ibona abagqugquzela ukuthi ngigcine ngisishiyile isicathamiya ngagxila ekwenzeni umaskandi.”
Uthe ngale-albhamu yakhe entsha useqokwe kwaze kwayikane kuma-awadi ehlukene.
“Ngike ngaqokwa kuma 1KZN TV emkhakheni we-Best video, kuma KZN Capital Awards kanye nakuMantshontsho Awards. Kanti futhi ingoma yami ethi Umzala ekwi-albhamu yesithathu idlala kakhulu kumabonakude futhi iyona engibeke kulelizinga engikulo njengamanje kwezomculo.”
UNzuza uthe uyazibhalela yena zonke izingoma zakhe kanti futhi uzincinzela yena nesigingci.
“Izingoma zami ngizibhala ngento eyenzekayo ngaleso sikhathi kanye nalezo zinto abanye abantu abadlule kuzona ngokuba umuntu oxhumana kakhulu nabantu abehlukene kuwo wonke amazing empilo.”
Lomculi akagcini nje kuphela ngokugxila emculweni wakhe kodwa uphinde abe ngumdidiyeli osezingeni eliphezulu. Useke wasebenza nabaculi abafana noBerita, Babsie Mlangeni kanye noBotsotso Mahlaba.
Uphinde aziqhenye futhi ngokuba umculi kamaskandi wokuqala ukumenywa isiteshi sikamabonakude i-Al Jazeera kanti uke wavela nakwi-Morning Live.
I-albhamu kaNzuza iyatholakala ezitolo kanye nakuma iTunes. Uma ufuna ukumbhukha ungashayela ku 082 676 0996 okanye uthumele umyalezo kaWhatsApp ku 063 075 6422. Uyatholakala nakuFacebook ekhasini elithi : Intombemnyama JJ Nzuza.